मार्केटिङ क्षेत्रमा विश्वभर आइरहेका नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त गराउन सेल्स समिट
१ भाद्र २०७५, शुक्रबार १२:४६
कहिले हाइड्रो, कहिले उद्योग, कहिले इन्स्योरेन्स, कहिले बैङ्किङ, कहिले शिक्षा आदि क्षेत्रका क्षेत्रगत विषयबारे गहन रुपमा छलफल एवम् तालिम दिने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौं ।
गोथ्र सेलरले हरेक वर्ष एचआर मिट, म्यानेजमेन्ट कन्क्लेभ र सेल्स समिट आयोजना गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म ११ पटक एचआर मिट सम्पन्न भइसकेको छ । गतवर्ष मात्रै म्यानेजमेन्ट कन्क्लेभ र दुईपटक सेल्स समिट आयोजना भइसकेको छ । यस्तो खालको कन्फ्रेन्सले कर्पोरेट क्षेत्रमा कस्तो सहयोग पुग्छ ? कम्पनीमा भएका कर्मचारीको क्षमता विस्तारमा कसरी मद्दत गर्छ भन्ने विषयमा गोथ्र सेलका प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझासँग क्यापिटल म्यागजिनले गरेको कुराकानी :
यस अघि दुई पटक सेल्स समिट भइसकेको छ । भदौ १ गतेबाट तेस्रो सेल्स समिट हुँदै छ । यो कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भनेर कसरी जाँच गर्नुहुन्छ ?
हामीले पहिले स्वविवेक प्रयोग गरेर दुईओटा सेल्स समिट ग¥यौं । त्यसमा हामीले सहभागीहरुबाट प्रतिक्रिया लिन एउटा पेपर बाँडेका थियौं । त्यसमा सहभागीले दिएका सुझावलाई अध्ययन एवम् मनन गरेर अरु कन्फ्रेन्स गर्दै आएका छौं । सोहीअनुसार तेस्रो कन्फ्रेन्स पनि हुँदै छ । यो क्रम अहिले पनि निरन्तर जारी रहन्छ ।
दोस्रो वर्षको कन्फ्रेन्समा सहभागीहरुका सुझावलाई आधार बनाएर त्यहीअनुसार कार्यक्रम तयार गरेका थियौ । केही समयअघि यो तेस्रो कन्फ्रेन्सको तयारीका सन्दर्भमा इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा १२ जना बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कन्ट्री हेडहरुसँग लन्चको कार्यक्रम राखिएको थियो । मैले त्यतिखेर उहाँसँग भनें— मैले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर यसअघि दुईओटा कन्फ्रेन्स गरें । अब तपाईंहरुले पनि यसमा केही सल्लाहसुझाव दिनुहोस् । किनकि यसमा तपाईंहरुकै कम्पनीका तपाईंहरुकै जुनियर कर्मचारी सहभागी हुने हुन् । यसमा उहाँहरु सुझाव आएका छन्,
सेल्स समिटले सेल्सको जिम्मेवारी लिएर बसेका र जुनियर कर्मचारीलाई कसरी फाइदा पुग्छ ?
सेल्स समिटले सहभागीहरुलाई पक्कै फाइदा गर्छ । एउटा त यहाँ सहभागी हुनेहरुको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । नेतृत्व क्षमता पनि विकास गर्न सघाउँछ । आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपयोग हुने टर्मिनोलोजी एवम् टेक्नोलोजीबारे पनि उनीहरुले बुझ्छन् । विश्वमै केकस्ता अभ्यास एवम् प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत प्रशस्त जानकारी हासिल हुन्छ । साथै आफूले जानेबुझेका विषयलाई आफ्नो कम्पनीमा गएर उनीहरुले लागू गर्न सक्छन् । फलस्वरुप कम्पनी विकासतर्फ अघि बढ्छ । आफ्नो कम्पनीलाई त्यहीअनुसार नेतृत्व गर्न थालेपछि स्वतः उत्पादन बढ्छ ।
तपाईंहरुले अधिकतम दुई सय जनालाई मात्रै कन्फ्रेन्स सहभागी गराउनुहुन्छ । के नेपालमा २ सय ७० भन्दा बढी कम्पनी वा सेल्सम्यान छैनन् ?
हाम्रो एकदिवसीय कन्फ्रेन्स हो । यसमा हामीले वन टु वन रुपमा प्रशिक्षण दिने र सहभागीहरुबीच वार्ता गराउन सक्छौं । त्यसैले यसमा सहभागी धेरै हुँदैनन् । ठिक्क आवश्यक मात्र हुन्छन् । यसले तालिमको प्रभावकारिता पनि बढ्छ । र सुनेको कुरालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्ने क्षमता राख्छ । हामीले व्यवसायी एवम् लगानीकर्तालाई पनि यसमा सचेत गराउने कुरा गर्छाैं । किनभने रोजगारदातालाई पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गराएर मात्रै कुनै पनि कम्पनीका कर्मचारीले फेसिलिटी पाउने हुन् । त्यसैले कम्पनीको मेरूदण्डका रुपमा रहेका कर्मचारीलाई खुसी राख्नेदेखि सेल्स, मार्केटिङ आदि विषयमा हामीले कन्फ्रेन्समा जानकारी दिने गर्छाैं ।
सेल्स समिटले कम्पनीलाई कसरी फाइदा हुन्छ ?
कर्मचारीले कम्पनीको भिजनअनुसार काम गरे मात्र कम्पनी नाफामा जान्छ । त्यसअनुसार हामीले कम्पनी सञ्चालकहरुलाई पनि सचेत गराएका हौं । कम्पनी नाफामा गयो भने त्यसको निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई पनि प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिने गरेका छौं । हामीले पहिलोपटक आयोजना गरेको सेल्स समिटमा २ सय ५० जना सहभागी थिए । त्यसपछि दोस्रो कन्फ्रेन्समा २ सय ७० जति सहभागी थिए । अहिलेको कन्फ्रेन्समा पनि २ सय ७० भन्दा धेरै सहभागी हुनेछन् ।
हामीले विशेषगरी मिड लेभल म्यानेजरलाई फोकस गरेका छौं । जसले कम्पनी सञ्चालकहरुलाई रिपोर्टिङ पनि गर्छ र तलका कर्मचारीको नेतृत्व पनि गर्छ, ती म्यानेजरहरु हाम्रा लक्षित वर्ग हुन् । त्यसैले विशेषगरी कम्पनीहरुले सिफारिस गरेका कर्मचारी÷म्यानेजर त आइ नै हाल्छन्, सँगै कम्पनीले नोमिनेसन नगरेको अवस्थामा पनि बिदा मिलाएर आफ्नै किसिमले पैसा तिरेर पनि कर्मचारी आउने गरेका छन् । तर धेरैजसो सहभागी कम्पनीहरुले सिफारिस गरेर नै पठाएका हुन्छन् ।
कुनकुन क्षेत्रका व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् ?
कन्फ्रेन्समा सहभागी हुने कम्पनीमा बैङ्किङ, इन्स्योरेन्स, कर्पाेरेट, टेडिङ बिजनेस, अटो, शिक्षण संस्था आदिका प्रतिनिधि छन् । सबैका लागि यो कन्फ्रेन्स उपयोगी हुनेछ । यसमध्ये ५ प्रतिशत व्यक्ति आफ्नो पीआर मेन्टेन गर्न आएको पनि पाएका छौं । हामीले सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा योजना बनाएका छौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा सबै उद्योग व्यवसायका व्यक्ति सहभागी भएका छन् । यो तेस्रो कन्फ्रेन्स सकिएपछि क्षेत्रगत अर्थात् एउटा क्षेत्रलाई मात्र लक्ष्य गरी सेमिनार एवम् गोष्ठी अथवा तालिम आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यो अझ बढी प्रभावकारी हुने हाम्रो अपेक्षा छ । किनभने हामीले अहिलेसम्म आयोजना गर्दै आएको सेल्स समिटमा सेल्सका सामान्य आधारभूत विषयबारे जानकारी दिँदै आएका छौं । यसमा कुनै विषयको सूक्ष्म तहमा हामी जाँदैनौं । किनभने यहाँ छलफल हुने विषय सबै उद्योग व्यवसायका लागि उपयोगी हुने किसिमका हुन्छन् ।
तपाईंहरुले क्षेत्रगत रुपमा पनि कर्मचारीलाई तालिम उपलब्ध गराउने योजना बनाउनुभएको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?
निकट भविष्यमै हामी कहिले हाइड्रो, कहिले उद्योग, कहिले इन्स्योरेन्स, कहिले बैङ्किङ, कहिले शिक्षा आदि क्षेत्रका क्षेत्रगत विषयबारे गहन रुपमा छलफल एवम् तालिम दिने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौं ।
हामीले एचआर मिटका कार्यक्रम पनि ११ ओटा कन्फ्रेन्स आयोजना भइसकेको छ । म्यानेजमेन्ट कन्क्लेभ पनि गत डिसेम्बरमा आयोजना भइसक्यो । आउँदो डिसेम्बरमा त्यसको अर्काे कार्यक्रम आयोजना हुँदै छ । हामीले अहिलेसम्म गरिरहेका कन्फ्रेन्सलाई नै निरन्तरता दिन सक्यौं भने त्यो ठूलो हुनेछ । अझ तिनले कार्य रुपमा प्रतिफल दिन सके भने त्यसमा हामी अझ गौरवान्वित हुनेछौं ।
माफियाको जालो नतोडेसम्म निर्माण क्षेत्र सुध्रिँदैन : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहकाे अन्तर्वार्ता